ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရင်း ဆော်ဒီကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးသွားရတဲ့ အဖြစ် – Burmese Online News
သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ နှာခေါင်းထဲကနေ Covid ရောဂါပိုးရှိမရှိနမူနာယူတဲ့အတံချောင်း ကျိုးကျန်ခဲ့ရာကနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာက ဆော်ဒီအာရေးဗီယားနိုင်ငံက Shaqra Hospital မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ခွဲအရွယ် ဆော်ဒီကလေးငယ်လေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က သေဆုံးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ညနေက ကလေးငယ်လေးဟာ ကိုယ်ပူချိန်တက်လာတယ်ပြောလို့ Shaqra Hospital ကို ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာဝန်က ကလေးငယ်ကျန်းမာတာတွေ့ရတဲ့အတွက် Covid ရှိမရှိ nasal swab ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ကလေးငယ် ကျန်းမာတယ်ဆိုတာက နှာခေါင်းကနေ Covid ပိုးနမူနာယူဖို့ ကျန်းမာတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တာကို ပြောပုံရပါတယ်။ သူ့ဦးလေးနဲ့ ဆော်ဒီသတင်းဌာန Al Arabiya မှာ အင်တာဗျူးအရ “ကလေးငယ်ဟာ နာတာရှည်ရောဂါနဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောဂါမျိုးမရှိပါဘူး” တဲ့။ ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေ Covid nasal swab နမူနာယူချိန်မှာ swab အတံက ကျိုးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတံကို ပြန်ထုတ်ယူဖို့ မေ့ဆေးသုံးပြီး ခွဲစိတ်ပါတယ်။
ကလေးအဖေက အစကအဲ့ဒီ ခွဲစိတ်တဲ့ procedure ကို လက်မခံပါဘူး။ နောက်တော့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက ပြဿနာမရှိဘူးပြောလို့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာ မနက် ၁ နာရီမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး swab တံအကျိုးကို အောင်မြင်စွာ ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကလေးဟာ သတိပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာ ကလေးအမေက အထူးကုဆရာဝန်ကိုခေါ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ ကလေးအမေက အထူးကုဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီး ကလေးအခြေအနေကောင်းမကောင်းနဲ့ swab တံကို အသေအချာဖယ်ထုတ်ခဲ့မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုမှာ သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခြင်းစတဲ့ surgery complication တွေမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးရုံဝန်ထမ်းက ကလေးအမေကို ဆရာဝန်ကြီးတွေမလာနိုင်သေးတဲ့အတွက်စောင့်ဖို့ပြောပါတယ်။ နောက်နေ့မနက် ၉ နာရီမှာ ကလေးဟာ သတိမလည်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းက CPR ပြုလုပ်ပြီး အသက်ကူရှုစက်တပ်ပေးပါတယ်။ ကလေးအဖေဆေးရုံကို ရောက်လာပြီး အထူးကုဆရာဝန်ကိုခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Radiologist က ဓာတ်မှန် X-ray ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကလေးရဲ့အဆုတ်တစ်ဖက်မှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိတ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကလေးအခြေအနေမကောင်းတာနဲ့ ကလေးကို ကလေးအထူးဆေးရုံကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ စီစဉ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အထိ အရေးပေါ်လူနာတင်ကားကမရောက်လာလို့ ဆေးရုံမှာထိုင်စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
လူနာတင်ကားဟာ နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၉ မိနစ်မှာ ရောက်လာသော်လည်း ကလေးမိသားစုက ညနေ ၃ နာရီကနေ ၅ နာရီအထိ ထပ်စောင့်နေရပြန်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကလေးသေဆုံးသွားပါပြီလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်စောင့်ရတာလဲ အသေးစိတ်မသိရသေးပါ။ ကလေးမိသားစုက စုံစမ်းအရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ကလေးဟာ မသေသင့်ပဲသေဆုံးခဲ့ရတာလဲ? ဘယ်လို procedure တွေလုပ်ခဲ့သလဲ? စုံစမ်းအရေးယူပေးပါတဲ့။ ဆော်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah က ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီက ကလေးအဖေကို ဆက်သွယ်ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကို လိုက်ပါမည့်အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကနေ ကျနော်တို့ ဘာသင်ခန်းစာရမလဲ?
Nasal swab ယူရင် ဂရုပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကလေးငယ်နဲ့ နာမကျန်းသူအတွက် special procedure ရှိသင့်ပါတယ်။ Nasal swab ယူခြင်းကို မကြောက်လန့်ဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကြောက်လန့်လွန်းရင်လည်း swab ယူရာမှာ ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အခုလို ကလေးငယ်သေဆုံးသွားတဲ့အထိ မဖြစ်စေဖို့ တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိဖြစ်သွားတာလဲကို သုံးသပ်သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့ လိုပါကြောင်း။ အထူးကုဆရာဝန်ရောက်မလာတဲ့ ပြဿနာမှာ ဆေးရုံရဲ့ procedure ကို အဓိကသုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ဆရာဝန်ခေါ်လို့မရတာမျိုးက Singapore General Hospital လိုနေရာမျိုးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က နှစ်ကြိမ်လောက် ကြုံဖူးခဲ့ပါတယ်။
အခု procedure ပြောင်းမပြောင်းမသိပါ။ ဆေးရုံရဲ့ procedure ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ Mount Elizabeth Hospital လိုနေရာမျိုးမှာ အစစအရာရာပြည့်စုံတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုပြဿနာမျိုးမှာ ဆရာဝန်ကို အပြစ်တင်ကြမှာစိုးလို့ ရှင်းပြတာပါ။ ဆေးရုံရဲ့ Management သာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
တစ်လအကြာတွင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှု ပြန်ပေါ်ပြီး စစ်တွေမြို့ CB ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်
အလယ်တန်းနဲ့ မူလတန်းကျောင်းဖွင့်ရက် နောက်တစ်လဆုတ်